सामुद्रिक शास्त्र : नङको अर्धचन्द्राकार हेरेर थाहा पाउनुस् आफ्नो भविष्य - Internet Khabar
सामुद्रिक शास्त्र : नङको अर्धचन्द्राकार हेरेर थाहा पाउनुस् आफ्नो भविष्य
September 1, 2017 July 28, 2018 Internet Khabar
काठमाडौं । सामुद्रिक शास्त्रमा मनुष्यका हरेक अंगको बखान गरिएको छ जसलाई हेरेर तपाईं आफ्नो भविष्यका बारेमा जानकारी पाउन सक्नुुहुन्छ। हातको रेखाबाट भविष्य जानिन्छ भन्ने त धेरैलाई थाहा छ तर कहिल्यै आफ्नो नङको अर्धचन्द्राकार विचार गर्नुभएको छ ? कुन औंलाको नङमा भएको अर्धचन्द्राकारले के लक्षण बताउँछ, थाहा पाइराख्नुस्।
चोरी औंलीको नङको फेदमा अर्धचन्द्र हुने व्यक्तिले जुन क्षेत्रमा हात हालेपनि सफलता प्राप्त गर्छ। यस्ता व्यक्ति चरम महत्वाकांक्षी हुन्छन्। आफ्नै मेहनतबाट उनीहरू सफल हुन्छन्।
माझी औंलीको नङमा अर्धचन्द्राकार हुने व्यक्तिले अचानक धनलाभ पाउने सम्भावना हुन्छ। तर माझी औंला शनिसँग सम्बन्धित भएकाले सामान्यतया यस्तो व्यक्तिलाई जे कुरा पनि ढिलो प्राप्त हुन्छ चाहे त्यो सम्पत्ति होस्, चाहे श्रीमती।
अनामिका औंलाको नङमा अर्धचन्द्र हुने व्यक्तिको जीवनमा मानसम्मान, पद प्रतिष्ठा र सबै परीक्षामा सफलता प्राप्त हुन्छ । सूर्यसँग सम्बन्धित हुनाले यो औंलामा अर्धचन्द्र हुँदा राजनीति, सरकारी जागिर र चिकित्सा लगायतका क्षेत्रमा प्रगति हुन्छ।
कान्छी औंला बुध ग्रहसँग सम्बन्धित छ। बुध व्यापार, संगीत र उद्घोषणका लागि अनुकूल ग्रह हो। कान्छी औंलामा अर्धचन्द्रकार हुने व्यक्तिले माथि लेखिएका क्षेत्रमा प्रगति गर्छन्।
बुढी औंलाको नङको फेदमा अर्धचन्द्राकार हुने व्यक्तिमाथि शुक्र ग्रहको कृपा हुन्छ। त्यस्तो व्यक्तिले भौतिक सुखसम्पदा प्राप्त गर्छ र अभिनयको क्षेत्रमा प्रगति गर्छ। यिनीहरूको इच्छाशक्ति मजबुत हुन्छ। एजेन्सीको सहयोगमा
September 1, 2017 July 28, 2018
यसरी गर्नुस् घरमा पूजा, धनदौलतको कमी हुने छैन
आजको राशिफल – मिति २०७४ साल भदौ १७ गते एकादशी तिथि शनिबार
September 3, 2017 July 28, 2018
किन १३ लाई अशुभ अंक मानिएको हो ?
सूर्य ग्रहण सकिनासाथ गर्नुहोस् यी ७ काम, पर्दैन कुनै असर !
घर बनाउँदा यस्तो गर्नुहोस्, धनको कमी कहिल्यै हुनेछैन
वास्तुशास्त्रका यी ८ उपाय अपनाउनुहोस्, चम्किनेछ तपाईको भाग्य !